Waxgaradka Cayn oo shaaciyey in aysan saxiixi doonin xilibaanada loo qorayo Puntland (Dhegeyso) – Radio Daljir
Agoosto 18, 2013 4:44 b 0
Buuhoodle, August 18, 2013 – Isimada iyo waxgaradka deeganada gobolka Cayn ayaa shaaciyey in aysan qeyb ka noqon doonin saxiixa keenista xilibaanada ee Baarlamanka cusub ee Puntland.
Suldaan siciid Cismaan Cali oo ka mid ah waxgaradka gobolka Cayn oo maanta shir jaraa?id ku qabtay magaalada Buuhoodle, ayaa sheegay in isimada Sool, Cayn iyo Sanaag aysan saxiixi doonin xilibaanada cusub ee Puntland.
Suldaan Siciid wuxuu sheegay ?in dhamaan waxgaradka beelaha degan gobolladaasi ay taageersan yihiin maamulka Khaatumo, isla markasna aysan cid u dirsan doonin Puntland oo haatan la diyaarinayo xilibaanadii.
Cuqaasha gobolka Cayn waxay sheegeen in ay jiraan qaar ka mid? ah isimada oo saxiixay in xilibaano ka tirsan kuwa deegaanka ay ku biiraan Puntland, wuxuu ku cel celiyey Suldaan siciid in ay muhiim tahay in aan laga bixin wixii lagu heshiiyey, iyo dhismihii khaatumo
Mahad Kilwe oo daljir ka tirsan ayaa war-bixin ka diyaariyey arintaas
Carmo oo loo dhisayo garoon ay ka soo degaan diyaaradaha yar yar ee adeegyada wadda (Dhegeyso)